CGM: haneho ny maha izy azy ny ATM Project | NewsMada
CGM: haneho ny maha izy azy ny ATM Project
Tarika tanora, vao herintaona niorenana, ny ATM Project, antsoina koa hoe Anjara Trio, saingy efa nametraka ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy. Efa ampoizina izany raha ny talenta sy ny fahaizan’izy telo lahy mpikambana, samy namiratra tamin’ny fifaninanana natrehiny. I Anjara no nandrombaka ny loka tamin’ny fifaninanana « La grande Ile Guitares talents 2017 », samy efa nahazo ny voalohany tamin’ny « Tremplin Madajazzcar » kosa i Mihaja, mpively ampongamaroanaka, sy i Tony, mpitendry gitara beso.
Araka izany, milalao mozika “jazz” izy telo mirahalahy, saingy mankafy “rock” ihany koa, araka ny nohamafisin’i Tony. Noho ireo fankafizana manokana ireo, mirona amin’ny fampifangaroana ny mozika “jazz” sy ny “rock” ny ATM Project. Efa nisy ny seho nandraisan’izy ireo anjara, toy ny tamin’ny « Jazz@tohatohabato ».
Amin’ny asabotsy 3 novambra izao kosa, seho miavaka amin’izay efa hita teo aloha no hoentin’ny Anjara Trio, ao amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) etsy Analakely. « Amin’io fotoana io no tena anehoanay telo mirahalahy ny maha izy anay », hoy hatrany i Tony. 13 ny sanganasa vaovao miisa efa nomanina, saingy betsaka ny zavatra tsy ampoizina ka mety haharitra ora roa, eo ho eo, mihitsy ny fampisehoana, araka ny nambaran’ny iray amin’izy ireo hatrany.
Tsy hijanona hatreto fa maromaro ny zavatra homanin’ny ATM Project, hanehoany ny firosoany lalina kokoa eo amin’ny sehatry ny mozika. Anisan’izany ny fandraisam-peo ireo hiran’ny tarika sy ny famolavolana rakitsary.